आईपीएल २०२१ लिलामीको पूर्ण ब्रेकडाउन
घर आईपीएल २०२१ टोली
आईपीएल २०२१ लिलामी - सबै समयको सबैभन्दा रमाईलो लिलामी
राजा डेनिश 14.03.2021
को लिलामी इन्डियन प्रिमियर लिग २०२१ धेरै प्रभावशाली थियो; लिलामीको अवधिमा त्यहाँ थुप्रै घटनाहरू थिए। ग्लेन म्याक्सवेल, क्रिस मोरिस, मोइन अली, र अन्य धेरै प्रतिष्ठित खेलाडी किन्नको लागि INR को टनहरू भाँचियो। लिलामीको क्रममा अर्जुन तेंदुलकर, कृष्णप्पा गौतम, र केही अन्य खेलाडीहरू जस्ता उदीयमान प्रतिभाको समावेश गरिएको थियो। हजारौं पक्ष प्रभावित आईपीएल लिलामी.
तलको पूरा ब्रेकडाउन छ आईपीएल लिलामी २०२१, त्यसैले कुनै पनि बकाया व्यर्थ को बिना, गरौं कि सीधा त्यसमा।
आईपीएल लिलामी स्थल र मिति
को आईपीएल लिलामी २०२१ फेब्रुअरी १ on मा चेन्नईको स्टेडियममा निर्धारित गरिएको थियो र लगभग १११14 खेलाडीहरू आईपीएल लिलामीका लागि दर्ता भए। अझै दुर्भाग्यवश, २2२ खेलाडीहरू मात्र आईपीएल लिलामी सर्टकटको लागि योग्य हुन सक्षम भए। आईपीएलमा विदेशी खेलाडीहरूको स 12्ख्या १२4 छ, जबकि आईपीएलमा भारतीय खेलाडीहरूको संख्या १ 164 छ। भारतीय लिलामी भारतीय समय क्षेत्र अनुसार PM बजे सुरु भयो र almost घण्टा लाग्यो।
न्यूनतम र उच्चतम मूल्य
लिलामीको अवधिमा, यो थाहा पायो कि खेलाडीहरूको सब भन्दा कम आधार मूल्य आईपीएल २०21 २० लाख थियो। अर्जुन तेंदुलकर जस्ता धेरै खेलाडीहरू र अन्य धेरै आधार मूल्यमा मात्र बेच्‍यो। खेलाडीहरुको उच्च आधार मूल्य दुई करोड थियो, भारतीय खेलाडीहरु केदार झाडाव, हरभजन सिंहको आधार मूल्य २ करोड थियो।
आठ विदेशी खेलाडीहरू जसको आधार मूल्य २ करोड छ:
शाकिब AL हसन
त्यो भन्दा पनि, १२ प्लेयरहरूको आधार मूल्य १. crores करोड थियो; सूचीमा उमेश यादव, हरमन विहारा, र दश अन्य खेलाडीहरु छन्।
अगाडि उल्लेख गरेझैं करीव २2२ खेलाडीहरू क्वालिफाइ गर्न सक्षम थिए आईपीएल लिलामी, र 52२ खेलाडीहरू मात्र आईपीएल को सम्झौता प्राप्त गर्न सक्षम थिए। को सबैभन्दा ठूलो हाइलाइट आईपीएल लिलामी २०२१ क्रिस मोरिस, ग्लेन म्याक्सवेल थिए। क्रिस मोरिसले सर्वाधिक १ 16.२5 करोड बोलपत्र राजस्थान रॉयल्स टोलीबाट पाए र बिक्री भयो, जुन अत्यन्त उल्लेखनीय रकम हो। आरआरले टोलीमा क्रिस मोरिस प्राप्त गरेर यसको सबै वालेट बजेट गुमायो। जे होस्, टोलीसँग खेलाडीबाट धेरै अपेक्षाहरू हुन्छन् र सत्रमा राम्रो खेल्ने आशा गरिन्छ।
को दोस्रो-उच्च बोली आईपीएल २०२१ मेगा लिलामी काइली जामीसन टोली न्यूजीलैंडबाट छन्; खेलाडी १ 15 करोडको सही रकममा बिक्री भयो। खेलाडी उत्कृष्ट फार्म मा छ र रोयल चुनौतीहरु बेंगलुरु द्वारा अधिग्रहण गरिएको थियो। हेरौं कि प्लेयर १ 15 करोड खर्च गर्न लायक छ कि छैन।
लोन निषेधकर्ता, ग्लेन म्याक्सवेल पनि लिलामीको समयमा एक ठूलो payday थियो। खेलाडी लगभग १.2.२5 करोडमा बेचिएको थियो। खेलाडी टोलीमा रोयल चैलेन्जर बंगलोर गए। बितेको श्रृंखलामा खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको देखिएको थियो, र फ्यानहरूले प्लेयरबाट धेरै अपेक्षा राखेका छन्।
खेलाडीहरू आधार मूल्यमा बिक्री भयो
टन्स खेलाडीहरू केवल आधार मूल्यमा बेचिन्थ्यो। स्टीव स्मिथ जस्ता खेलाडीहरू २० करोड २० लाखको आधार मूल्यभन्दा माथि २० लाख मात्र बेचिएका थिए। हरभजन सिंह, केदार जाधव, र अन्य धेरै खेलाडीहरू आधार मूल्यमा बेचिन्थ्यो।
आधार मूल्यमा आईपीएल लिलामी २०२१ मा बेचिएका खेलाडीहरूको सूची:
मुजीब तपाईंको रहमान
आईपीएल लिलामी २०२१ मा आधारित टोलीहरूको ब्याटि line लाइन
को आईपीएल लिलामी २०२१ केही उल्लेखनीय पक्ष बाहिर लात; आईपीएल २०२१ नयाँ टीम RCB जस्तै, KKR ले उत्कृष्ट ब्याटि line लाइनअप प्राप्त गर्यो। यी खेलहरूको ब्याटि unit इकाईको ठूलो सम्भावना छ र यसले मैचलाई एक्लैले जीतमा पुर्‍याउन सक्छ, ग्लेन म्याक्सवेल र काइली जन्सन जस्ता खेलाडीहरूको टीम रोयल चैलेन्जर बंगलोरमा समावेश गर्नु ठूलो कुरा हो। सनराइजर्स हैदराबाद र मुम्बई इन्डियनहरू जस्ता अन्य समूहहरूले नयाँ शक्तिशाली बलिंग लाइनअप प्राप्त गरे।
नीलामी २०२१ मा प्राप्त खेलाडीहरू हुन्:
बेन कटिंग, हरभजन सिंह, पवन नेगी, शाकिब अल हसन, वैभव अरोड़ा, शेल्डन जैक्सन, भेन्केश अय्यर।
आईपीएल २०२१ टोली KKR को २०२१ को अघिल्लो टीमबाट राखिएको छ।
लिलामीमा प्राप्त खेलाडीहरू हुन्:
चेतेश्वर पुजारी, हरि निशांत, कृष्णप्पा गौथम, हरिशंकर रेड्डी, मोईन अली, भगथ वर्मा।
र अन्य राखिएका खेलाडीहरू।
प्लेयरहरू आईपीएल लिलामीमा किनिए - पियुष चावला, अर्जुन तेंदुलकर, नेथन कउलटर-नाइल, जेम्स नीशम, युद्धवीर सिंह, मार्को जान्सेन, एडम माइल।
र लगभग सबै खेलाडी अघिल्लो टीमबाट राखिएको छ।
रोयल चुनौतीहरु बंगलोर
आईपीएलमा खेलाडीहरू - ग्लेन म्याक्सवेल, रजत पाटीदार, केएस भरत, मोहम्मद अजहरुद्दीन, डेनियल क्रिश्चियन, सचिन बेबी, काइली जैमीसनलगायत अन्य थुप्रै खेलाडीहरू।
खेलाडीहरू मा प्राप्त आईपीएल लिलामी २०२१ हुन्:
उमेश यादव, टम कुरन, साम बिलि ,्स, विष्णु विनोद, रिपाल पटेल, लुकाम मेरीवाला, एम सिद्धार्थ र टोलीका अन्य संरक्षित खेलाडीहरू।
टोलीले लिलामीमा प्रशस्त खेलाडीहरू किन्नुभयो:
रिले मेरिदिथ, जलज सक्सेना, सौरभ कुमार, झा रिचर्डसन, शाहरुख खान, उत्कर्ष सिंह, सौरभ कुमार, मोइसेस हेनरिक्स, डेविड मालन, र अन्य राखिएका खेलाडीहरू।
एक मात्र टोली जसले अघिल्लो स्क्वाडसबाट लगभग हरेक खेलाडीलाई समेट्दछ, यद्यपि खेलाडीहरू आईपीएल लिलामी २०२१, हुन्:
जगदेवेश सुतिह, मुजीब उर रहमान, केदार जाधव।
क्रिस मोरिस, केसी कैरियप्पा, आकाश सिंह, शिवम दुबे, मुस्तफिजुर रहमान, चेस्टर सकरिया, लियाम लिभिंगस्टोन, कुलदीप यादव, र अन्य राखिएका खेलाडीहरू।
को इंडियन प्रीमियर लीग लिलामी रमाईलो र रमाईलो थियो; लिलामीको क्रममा धेरै अप्रत्याशित घटनाहरू घटे। को महत्वपूर्ण हाइलाइटहरू आईपीएल लिलामी ग्लेन म्याक्सवेल, क्रिस मोरिस र काइली जानसन थिए। ग्लेन म्याक्सवेल १ 14.२5 करोडमा बेचेका थिए आरसीबीलाई, जसले टीमको मिडल अर्डर सुरक्षित गर्दछ किनकि ऊ ठूलो फर्ममा छ। क्रिस मोरिसले राजस्थान रोयल्स बलिling इकाईमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। २०१te पछि चेतेश्वर पुजारा पनि लिलामीमा देखा पर्‍यो र उनको टोली चेन्नई सुपर किंग्समा कारोबार गरियो।
माथिको माथिको पूर्ण ब्रेकडाउन हो आईपीएल लिलामी २०२१, र समग्रमा यो एउटा रमाईलो कार्यक्रम थियो र आइपीएल २०२१ मेगा लिलामी जो चेन्नईमा आयोजित थियो।
रोयल चुनौतीहरु बंगलोर अर्को आईपीएल विजेता? RCB को गहन विश्लेषण
तपाइँ सबै आईपीएल २०२० को बारेमा जान्नु आवश्यक छ 11.03.2021
सनराइजर्स हैदराबाद - आईपीएल टीमको बारेमा व्याख्या गरिएको छानबिन 12.03.2021
राजस्थान रोयल्स - यस आईपीएल टीमको बारेमा विस्तृत विश्लेषण! 13.03.2021